Maalinta: Ogast 28, 2017
Bolu Bayramda waa lacag la'aan
Duqa magaalada Bolu wuxuu shaaca ka qaaday in basaska gaarka loo leeyahay ay noqon doonaan kuwa bilaash ah inta udhaxeysa bisha Sebtembar 01 iyo 04-2017 sababtuna tahay Ciidul Adxaa. Go'aanka ay qaadatay Dawladda Hoose ee Bolu, sida fasax kasta, tanina waa Iiddii Salka. [More ...]
Maalmaha 2 ee ugu horeeya ee basaska ah ee ka yimaada Ciidda Sacuudiinka ee kuyaal badda
Qaadista tallaabooyinka Ciidul Adxaa, Denizli Metropolitan Municipal ayaa ka dhigtay basaska degmadu lacag la’aan maalinta ugu horeysa ee 2 ee xafladda si looga hor tago muwaadiniinta inay ku dhibtoodaan booqashada qabuuraha, ehelada iyo asxaabta. Denizli Metropolitan Municipal, muwaadiniin raaxo leh iyo [More ...]
Basaska iyo taraafikada dowladda hoose ee Kongo ee Dowlada Hoose ayaa yimid si kor loogu qaado. Qiimaha minibus ayaa lagu xukumay inta u dhaxaysa 2,25 iyo 2,60 TL, halka qiimaha basaska iyo taraam sidoo kale kor loo qaaday. Sida ku qoran kaadhka gacanta oo buuxa [More ...]
Terminal Baska Izmit Intercity 10 maalin walba Ciid Ciidul Adxaa ayaa la kulma deg deg macaan. Badbaadada rakaabka iyo raaxada waxay muhiimad weyn utahay garoonka diyaaradaha halkaas oo ay aad u cufan yihiin fasaxa ka hor. Xiriirka Dowlada hoose ee Magaalada [More ...]
RayHaber 28.08.2017 Warbixinta Shirka
Dhismaha Gawaarida Dhismaha Wadada Waddooyinka Waddada Cusub
Tareenka oo ku dhuftay Kayseri
Kayseri kuma uusan dhaawacmin shilka shilkan ka dhashay iyada oo ay sabab u ahayd gaadhiga oo ku dhacay taraamka, laakiin waxaa ku dhacay shil baabuur kadib shilka. Sida ay sheegayaan wararka la helay, shilka wuxuu ka dhacay Düvenönü, taraamka leh kan ugu sarreeya kala guurka, ayaa si lama filaan ah uga soo hor muuqday [More ...]
Gaadiidka ayaa ku xannibmay jidka tareenka
Degmada Ödemiş ee İzmir, waardiyaha ilaalada tareenka ee ku xayiran buundada ayaa illowday. Wadada tareenka taraafikada taraafikada wuxuu u furan yahay cagaf-hoosaadka safka '10.30 safka' ee wadada tareenka ee Eylül [More ...]
Marmaray wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo Jidka IZBAN
TCDD Izmir degmada Metropolitan si wadajir ah u qotomiyey wadajir ku shaqeeya by nooc ee ugu weyn iyo marmaray Turkey ayaa waxay bilaabeen in ay isticmaalaan line ugu dheer dhulka hoostiisa ee magaalada hareeraheeda ah Haddii aad dooratay line Heerka-İZBAN. İzmir-Torbalı wuxuu hadda ku jiraa khadka İZBAN [More ...]
Adeegga Shaqaalaha waxaa la heli doonaa Agaasimayaasha Guud ee Jamhuuriyadda Waddooyinka Tareenka ee Waddanka (TCDD) 2. DIIWAANGALINTA DIIWAANKA IYO XAALADAHA XIDHIIDHKA TCDD 2 Agaasimeha Guud ee Arimaha Bulshada Gudiga Arimaha Bulshada [More ...]
Maanta taariikhda: 28 August August 2003 Wasiirka Gaadiidka Binali Yıldırım ee Bugün
Maanta taariikhda 28 Agoosto N Maareynta iyo Isbedelka Mobilista oo leh Hadafyada le waxaa bilaabay hogaminta Wasiirka Gaadiidka 2003 Binali Yıldırım. August 28 2009 Turkey iyo Pakistan si waafaqsan tilmaamaha oo ka mid ah Wasiirka Gaadiidka markii ugu horeysay la aasaasay "Turkey-Pakistan [More ...]